Beta 1 yevagadziri watchOS 5.1.3 uye tvOS 12.1.2 yakaburitswa | Ndinobva mac
Masikati mamwechete takaona kusvika kwemamwe maBhaibheri beta 1 yewatchOS 5.1.3, iOS 12.1.2, uye vagadziri veTVOS 12.1.2. Masikati ano Apple yatanga zvigadzirwa zvebeta pamwe chete uye isu takamboona maitirwo azvo nenzira yakadzedzereka mukati memazuva akasiyana.
Panguva ino shanduro dze beta dzinouya dzakabatana uye mavari haugone kuona shanduko dzakawandisa maererano nenhau dzemushandisi, nhau huru dzakanangana zvakananga ne kunatsiridzwa kugadzikana uye kuchengetedzeka kweOS. Apple haiwedzere shanduko huru mune idzi beta vhezheni kune vanogadzira, asi tinotarisira kuti ichagadzirisa mamwe mabugs ane vamwe vashandisi
watchOS 5.1.2 haigadzirise iyo bug iyo vamwe vashandisi vanayo paApple Watch nesarudzo yeku "Simudza utaure" naSiri. Iyi bhudhi yanga ichishanda kubvira dzimwe shanduro dzekare uye pazvakaratidzika kuti ichagadziriswa mune yekupedzisira vhezheni ya5.1.2, pakupedzisira haina kunge yakadaro uye isu tinoenderera mberi nedambudziko iri rinogona kugadziriswa mune iyi vhezheni 5.1.3, tichaona.
Padivi pako tvOS inowedzerawo zvakajairika bug fixes uye zvimwe zvishoma zvinokosheswa. Mune idzi shanduro dzese, mhinduro yezvikanganiso nemabhugi akaonekwa anokunda, saka tinotarisira kuti anotevera emhando shanduro achanyatsogadzikana mumativi ese. Iyo yeruzhinji beta vhezheni yeTVOS haisi kuwanikwa izvozvi senge iyo yeIOS 12.1.2, pamwe mumaawa mashoma anotevera ichaburitswa kune avo vanoda kuiisa pane yavo michina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 1 uye tvOS 5.1.3 mushambadzi beta 12.1.2s yakaburitswa zvakare
Apple inoburitsa macOS Mojave 10.14.3 beta 1 yevagadziri